5 Yemagariro Media Kushambadzira Kufembera kwe2014 | Martech Zone
5 Yemagariro Media Kushambadzira Kufembera kwa2014
Chitatu, Ndira 15, 2014 Douglas Karr
Tinofanira kushamisika kuti vezvenhau kushambadzira agency Offerpop auya ne shanu nzira dzekutengesa dzekutarisa gore ra2014 - ese ayo anoratidza kukura nekuremekedza evanhu vezvenhau Marketing?
Vanoshandisa ichava ivo vatengesi vezvinhu.
More kusangana kwevanhu mukushambadzira kwetsika.
Kubatanidza e pamwe nevezvenhau kushambadzira.
Zvimwe zvevanhu komesi.
More social media mishandirapamwe.
Nepo zviitiko zvine chekuita nevezvenhau zvichiwedzera, ini ndine tarisiro yekushambadzira nekuremekedza vezvenhau. Ini ndinotenda panogona kunge paine chiitiko, asi kushoma kwekuedza Zvishandiso zvekushambadzira zvemagariro zvicharamba zvichivandudza uye zvichipa vashambadzi zvese zvavanoda kuti vabatanidze, kutengesa uye kupindura kune vezvenhau - pasina kushandisa nguva yakawanda ipapo! Nekukura kwemunhu wese kuchave neruzha uye zvichanetsa kutora mutengi uye bhizinesi kutarisisa kunze kwekunge uchiita rakanakisa basa.
Tags: komesiemail uye vezvenhaufcommerceofferpopzvekutengeseranaSocial Media Marketing
Kukwidzika Kwemagariro uye Nhare Native Ads
Ndira 20, 2014 na11: 41 PM
Yako Info-graphic ine yakanaka yakamira maonero iyo, iri nyore kuverenga uye inokwezva kune ziso.